Christian Eriksen oo ka jawaab celiyay wararka lala xiriirinayo inuu ku biirayo kooxaha Real Madrid iyo Barcelona – Gool FM
(Tottenham) 30 Maajo 2018. Khadka dhexe kooxda Tottenham Hotspur Christian Eriksen ayaa xiliyadii lasoo dhaafay lala xiriirinayay inuu ku biiriyo midkood muruq weynayaasha kubada cagta dalka Spain Real Madrid iyo Barcelona si ay ula saxiixdaan suuqa xagaaga.
Hadaba wareysi gaar ah uu bixiyay Christian Eriksen ayaa ayaa waxaa soo xigtay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain wuxuuna kaga hadlay wararka ku aadan in lala xiriirinayo midkood kooxaha Real Madrid iyo Barcelona.
“Ma doonayaa inaan ka hadlo wararka xanta ah”.
Dhinaca kale Macalinka xulka qaranka Danmark Åge Hareide ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in Christian Eriksen uu awoodo xirashada maaliyada labada kooxood Real Madrid iyo Barcelona.
“Christian Eriksen wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro kubada cagta, laakiin isagoo aan ka fekereynin bandhiga, sidaasi darteed kama walwalayo mustaqbalkiisa”.
Warar horay u soo baxay ayaa xaqiijiyay in Barcelona ay qeyb kasoo noqon doonto loolanka Christian Eriksen hadii ay ku guul dareesato lasoo saxiixashada Antoine Griezmann halka Real Madrid ay dooneyso inuu badal ugu noqdo Luka Modric.
Neymar Jr oo xaalad argagax ka abuuray tababarkii maanta ee xulka qaranka Brazil